Home News Al Shabaab oo war kasoo saaray Weerar Dad Kenyaan ah lagu dilay...
Al Shabaab oo war kasoo saaray Weerar Dad Kenyaan ah lagu dilay oo ka dhacay Duleedka Magaalada Mandheera
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Xubno katirsan Al Shabaab oo Weerar Dhimasho iyo dhaawac geystay ka fuliyay deegaan ku yaalla Duleedka Mandheera.
Sarkaal katirsan Booliska Kenya oo lagu Magacaabo Stephen Ng’etich ayaa Warbaahinta u Xaqiijiyay in Weerar dhabagal ahaa loo dhigay dad aan Muslimiin aheen oo kusii jeeday Magaalada Mandheera, inkastoo uu ka gaabsaday tirada dadka la dilay.
War qoraal ah oo lagu daabacay baraha Al Shabaab ayaa lagu sheegay in weerar guulaystay lagu qaaday gaari Bas ah oo ay la socdeen dad aan Muslimiin aheen ama Karishtaan ah oo ku socdaalayay deegaanka Kutulo oo katirsan gobolka Wajeer.
Al Shabaab waxay sheegtay in ugu yaraan 10 qof Kenyaan ah ay ku dishay weerarkaasi.
Al Shabaab ayaa marar badan dad ku laayay gudaha Kenya kuwaa oo intooda badan beegsanayay dadka aan Muslimiinta aheen, siina daaynayay Muslimiinta.